“Antananarivo salama”. Olona an-jatony sahady omaly no tonga teny an-toerana ka anisan’ny tena maro an’isa indrindra ny zokiolona sy ny zaza amam-behivavy. Nitily ny maso, ny sofina, ny fahasalaman’ny ativava, indrindra fa ireo manana olana amin’ny resaka diabeta sy ny fiakarana na fidinan’ny tosidra no tena betsaka tamin’izany. Tsy latsa-danja ireo manana olana amin’ny resaka taolana ka mila fandidiana maika… Nambaran’ireo tompon’andraikitra fa fitiliana fotsiny ihany aloha no notanterahina teny an-toerana fa eny anivon’ny Clinique advantista eny Soamanandrariny avokoa no hatao ny fanalana nify sy ny fandidiana rehetra ho an’ireo izay mila izany. Fa ankoatra ity tolotra ara-pahasalamana ity dia misy ihany koa ny tranoheva manokana mampianatra ny renim-pianakaviana ny fomba fikarakarana sakafo ara-pahasalamana ho an’ny fianakaviana, tsy mampiasa hena nefa tsy be menaka sy siramamy ihany koa. Toraka izany koa ireo manome torohevitra maimaimpoana momba ny fikarakarana vatana… Tsy mitory ny filazantsara fotsiny ihany moa hoy pastera Ratsarasaotra Paul, mpandrindra ankapoben’ny hetsika no asa hiandraiketan’ny fiangonana Advantista fa eo ihany koa ny fikarakarana ny fahasalaman’ny mpiara-belona.